Khipha usetyenziso okanye iinkqubo kwi-Mac yakho ngaphandle kokushiya umkhondo. | Ndisuka mac
Usebenzise iMac yakho entsha ixesha elincinci kwaye ixesha lifikile xa ufuna ukukhipha enye yeenkqubo, izixhobo okanye usetyenziso onalo kwinkqubo yakho kwaye awazi ukuba ungayenza njani ukuze igqibelele isuswe. Kule meko kufuneka siyiqaphele loo nto ukususa izicelo okanye iinkqubo kwi-macOS kulula kakhulu Kwaye awunakucinga kakhulu okanye ubenze nzima ubomi bakho.
Njengofakelo lwezi zicelo ngumsebenzi olula kakhulu, okhawulezayo nococekileyo, xa kufuneka senze ngaphandle kwazo lula nesantya siyalingana. Ngamafutshane, asidingi zicelo zomntu wesithathu zokupheliswa kweenkqubo, akukho sidingo sokucinga ukuba kusenokubakho iintsalela zezicelo ezisusiweyo kuba inkqubo yokusebenza inoxanduva lokususa iintsalela, kodwa Ukuba sisafuna ukusebenzisa usetyenziso oluthile ukuphelisa usetyenziso sinokwenza njalo.
1 Susa iiapps ngaphandle kweapps zomntu wesithathu
1.1 Ukhetho lokucima usetyenziso aluveli
2 Masiqale ngeCleanMyMac
3 I-AppZapper sisicelo esilandelayo
4 I-AppCleaner yeyesithathu esiyicebisayo
5 Ukushwankathela kancinci
Susa iiapps ngaphandle kweapps zomntu wesithathu
Njengoko sibhengeze ekuqaleni kwesi sifundo, kukho izicelo zomntu wesithathu zokukwazi ukushenxisa ii -apps kwiqela lethu kodwa inyathelo lokuqala kukubona ukuba ezi zicelo azifuneki kuba sinokuphelisa ngokuthe ngqo ngokurhuqa inkunkuma okanye ngokukhetha usetyenziso esifuna ukulususa kwiLaunchpad.
Olu lolona khetho lwam lubalaseleyo kwaye ukuze siphumeze kufuneka singene kwifayile ye- I-Launchpad> Bambelela kwisicelo (njengakwi-iOS) kwaye «shaky X» iya kuvela ukucofa kuyo kwaye uyicime.
Ukhetho lokucima usetyenziso aluveli
Kungenzeka ukuba ezinye izixhobo okanye usetyenziso esinazo kwiLaunchpad -ngakumbi ezo zingaveli ngqo kwiVenkile ye-Mac App- ezikhutshelwe ngqo kwiwebhusayithi yonjiniyela sukuyibonisa lonto "shaky X" kwikona ephezulu ngasekunene okanye ungabavumeli ukuba basuswe ngokuthi "barhuqele ngqo kwinkunkuma".
Kule meko kufuneka siphume kwiLaunchpad kwaye ngokulula jonga i icon yesicelo ngokuthe ngqo kwi-Finder yethu. Singakwenza oku ngokuthe ngqo kwiFumana kwiFestile okanye ngokuthe ngqo ukufikelela kulawulo lweeSicelo kwaye emva koko ilula njengokuitsalela kumgqomo wokuphinda usebenzise kwakhona kwaye iya kususwa ngokuzenzekelayo kwi-Mac nakwi-Launchpad.
Ngokwam ndingatsho ukuba le ndlela yile bendikade ndiyisebenzisa ukususa usetyenziso kwiMac yam, kodwa singasebenzisa usetyenziso esilufumana kwiVenkile yeApple Mac nangaphandle kwayo ukuze sisuse. Le yinto yobuqu yomsebenzisi ngamnye kwaye kuyo nayiphi na imeko into enomdla malunga noku kukuba ukuba kuxhumo ngalunye lwenkqubo yokusebenza enje ngoku eza kuvela kwi-MacOS Sierra ukuya kwi-MacOS High Sierra senza ufakelo olucocekileyo lwenkqubo, ukusebenzisa izicelo zomntu wesithathu akunasibonelelo. Ukuba kwelinye icala asizukufaka i-OS yethu kwasekuqaleni, kunokwenzeka ukuba ezinye zezicelo esiza kuzibona apha ngezantsi zilukhetho olungcono, kodwa ayisiyi-100% enokubonakaliswa.
Esi sesinye sezicelo esizibonileyo kwizihlandlo ezininzi eSoy de Mac.Ewe, eyona nto intle malunga nesi sicelo kukuba iyasivumela ukuba siqhubeke nokucoca ngokunzulu kwi-Mac yethu, ngaphaya kokususa usetyenziso okanye izixhobo ezifakiweyo. Isicelo sihlawulwe kwaye ayisiyiyo ukuba ngexabiso eliphantsi ngokuchanekileyo ukusukela Inexabiso le-31,96 euro, kodwa ngayo sinethuba lokuphelisa, ukongeza kwizicelo esingasazifuniyo, ukucoca izixhobo zethu ngokubanzi.
Kodwa ngoku Masibone ukuba sizisusa njani ngokuthe ngqo usetyenziso ngeCleanMyMac 3, Yinguqulelo enokufumaneka ngokuthe ngqo kwifayile ye- Iwebhusayithi yonjiniyela yeMacPaw. Le app khange ifumaneke kwiVenkile ye-App ye-Mac okwethutyana, kodwa umphuhlisi unokuthenjwa.
Sivula i-CleanMyMac 3 3.8.4 eluhlobo lwangoku kwaye siyahamba Izixhobo kwimenyu esezantsi ekhohlo kwaye ucofe kuKhipha. Izicelo esizifakileyo kwi-Mac yethu ziya kubonakala ngokulula Sikhetha usetyenziso olunye okanye nangaphezulu ngaxeshanye kwaye ucofe kuFakelo oluGqibeleleyo. Siza kubona ukuba iiFayile eziNcedisayo okanye iiNkqubo ezikhethiweyo zesicelo ngokwaso ziya kuvela eziya kuthi zisuswe ngokuzenzekelayo.
Olu lolunye lwezo zicelo endizisebenzisileyo kwaye lusebenza kakuhle, kodwa ndicinga ukuba ukususa izicelo kuphela ayisiyiyo eyona ndlela iphambili ngenxa yexabiso layo. Ewe iyasinika ujongano olulula nolicocekileyo ikwasebenza ukugcina iMac yakho icocekile.
I-AppZapper sisicelo esilandelayo
Esi sisicelo esichasene ngokupheleleyo necocekileyo iMyMac 3. Kule meko, usetyenziso olufumanekayo ngaphandle kwevenkile yesicelo se-Apple, ine-interface endala, sinokude siphelelwe lixesha kwaye akakhange afumane iinguqulelo ezintsha ixesha elide.
Kwelinye icala, yonke le nto ujongano kunye nolunye olubonakala ngathi lubi kakhulu kwifayile ye- AppZapper usetyenziso, umahluko ngokuthe ngqo kwi-fukusebenza kunye nokusebenziseka lula kwesicelo. Ngokukhawuleza xa sivula usetyenziso, le festile ibonakala apho sinokuqala khona ukucima ii -apps:
Sitsalela ngokuthe ngqo usetyenziso ukucima kwaye yiyo loo nto. Kodwa nathi sinako chukumisa i «switch» ebonakala kwicala elingasekunene kwaye siya kubona zonke usetyenziso esizifakileyo kwikhompyuter yethu. Nje ukuba sicofe leyo sifuna ukuyicima, iilayibrari ziqhotyoshelwe ifayile ye log, .plist, njl, ezihlala zifakwe kwisicelo ngasinye kwikhompyuter yethu kunye cofa kwi «Zap!»
Isicelo siya kususwa ngokupheleleyo kwiqela lethu.
I-AppCleaner yeyesithathu esiyicebisayo
Okokugqibela kwezicelo esifuna ukwabelana ngazo nonke kukwakho nesicelo samagqala kwimisebenzi yokususa iiapps kwaye engaphandle kwesitolo esisemthethweni seApple. Kule meko AppCleaner Isinika ujongano olufana nesicelo sangaphambili kunye nenkqubo yokuphelisa usetyenziso ngokufanayo. Esi sicelo sesinye sezo ndizisebenzise kancinane kodwa yenza umsebenzi wayo kunye nezinye izicelo esikubonile kweli nqaku.
Ukucaciswa kweAppCleaner kukuba xa uyikhuphela kwiwebhu ayifakwanga kwifolda yeZicelo, kufuneka siyigcine ngesandla. Nje ukuba sigcinwe siyayiphumeza kwaye iya kubonakala ngonxibelelwano olufana ne-AppZapper, Ukurhuqa kunye nokucima:
Sinoluhlu lwezicelo ezifakwe kwi-Mac ukuba sicofa kwiqhosha eliphezulu lasekunene. Nje ukuba sibe noluhlu lwezicelo, kufuneka sikhethe izicelo esifuna ukuzicima kwaye kunjalo:
Ngamafutshane, singasebenzisa ezi okanye ezinye izicelo ezikhoyo ukucima ii -apps kwi-Mac yethu, kodwa owona msebenzi ulunge kakhulu (ukuthetha buqu) uhlala uhlalaUhlobo lwendalo lwenkqubo yethu ye-macOS Kwaye kulula kakhulu ukuyenza kwaye asizukukhuphela nantoni kwikhompyuter yethu. Kukho izicelo ezinjenge-CleanMyMac ezinikezela elinye inqanaba lokukhetha ezikhoyo ukongeza ekususeni ii -apps, kodwa ekugqibeleni into esiyijongayo kule meko kukususa ezo zicelo singazisebenzisiyo kwaye asiboni mfuneko yokufaka nantoni na. Njengamaxesha onke kusenzeka kwezi meko, ukungcamla imibala kwaye wonke umntu ukhululekile ukufumana olu hlobo lwesicelo kwi-Mac yabo, kodwa kuqala sinokuqinisekisa ukuba akukho mfuneko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » Khipha iinkqubo okanye usetyenziso kwiMac yakho
Inqaku elilungileyo. Ndithengile imac kwaye ndilahlekile. lixesha lokucoca kancinci.
UMiguel Leon sitsho
Inqaku elilunge kakhulu, eliluncedo kakhulu kukwazi iinkqubo ezikuvumela ukuba ukhiphe usetyenziso ngaphandle kokushiya umkhondo.
Ingxaki endinayo kukuba ndiyikhuphile inkqubo engakhange isebenze kakuhle ukuyifaka kwakhona, kodwa xa ndiyizama i-mac ayindivumeli kwaye indixelele ukuba sele ifakiwe, kwaye emva kokukhangela, andiboni Nantoni na eseleyo kuyo naphina. Ndingenza ntoni?
Phendula uMiguel León
Ndithenge enye phantse iminyaka emibini edlulileyo kwaye bendisebenza kuyo, sele ndifunde izinto ezininzi ebendingazazi kwaye ndiqhubeka njalo, kodwa ekugqibeleni le khompyuter ibifanele kakhulu. Ukubulisa
buyisela inkqubo ngomatshini wexesha, emva koko usebenzise i-appfixer okanye ucime ngokuthe ngqo ukhetho lwethala leencwadi lakho lomsebenzisi.
Molweni ngemini emnandi !!!. Ndicela ukuba awukwazi ukucima okanye ukukhipha oovoo njl ... Ndikhangele
Naliphi na le nkqubo yokukhupha izicelo, iifayile eziphindiweyo, njl., Kodwa ngeSpanish ??? Ndiyayixabisa le ngcaciso. Enkosi
Uyazi ukuba kutheni i-safari ivula imidlalo emininzi kunye namaphepha entengiso
UMaria de la Luz sitsho
Phendula uMaria de la Luz
UGeorge Ferreira Silva Do Amaral sitsho
Andikwazi ukuyeka iZipCloud kwi-mac yam, ndenza njani? Enkosi
Phendula u-Diego Ferreira Silva Do Amaral
Ndinosulelo, ndicoceka njani?
Oswaldo molano sitsho
Ibiluncedo kakhulu kum.
Phendula uOswaldo Molano
Ndibhala oku kuba yenzeke kum izolo kwaye kundithathe kakhulu ukufumana isisombululo. Kuyavela ukuba ndikhuphele usetyenziso lomxholo wefoto kwi-mac yam, ndathi xa ndiyivula, ndabona ukuba ayisiyiyo le ndiyifunayo. Ke ndenze into endihlala ndiyenza, kwifolda yezicelo endiyifumeneyo ukuba ndiyicime, ndiyicofe imouse kwaye ndiyirhuqele enkunkumeni. Ifestile encinci iya kuvela ngalo lonke ixesha ndizama ukuyicima endibuze iphasiwedi yokuFumana ukuze ndiyicime. Ndingabeka enye kuphela endinayo, engumlawuli we-mac yam, enguye ekubuza xa ukhuphela usetyenziso, kulungile, bekungekho ndlela. Ikhompyuter yasebenza ngokufanayo, kodwa ngaphakathi kwengqondo yam indixelele ukuba kufuneka kubekho inkqubo eza kukuvumela ukuba usule. Ndingene kwisicelo andazi ukuba mangaphi amaxesha okubona ukuba ndingafumana into ethile, kwaye ukubambeka ndabona ukuba kubekwe efestileni ukuba isicelo sivaliwe kwaye ndafumana ukuhlela umbhalo kunye nenkqubo endiyikholelwayo kwi-HTLM. Yiza, akukho luvo lokufuna. Ndabona izinto ezininzi phaya malunga nokubeka ezinye iitekisi kwi-HTLM kwiwindows, kodwa kuba andiqondi phantse nantoni na malunga ne-mac, ndikhethe ukuqhubeka nokujonga. Ekugqibeleni njengesiqhelo ndiyifumene. Yayiyinto enkulu engenamsebenzi ekhoyo kwaye ilandelayo: Tsala usetyenziso kwiLaunchpad kwaye uyibambe ngemouse, emva koko uyicime. Ndabona indlela eya ngqo kumgqomo wenkunkuma kwaye ndayicima, ndajonga ngaphambili ukuba yayingasekho kuluhlu lwezicelo. Kwaye kunjalo. NDIBHALA KONKE OKU NJENGONCEDO, KUMNTU OBENZEKA UKUBA KWENZEKE NGALINYE NGEXESHA ELITHILE. Enkosi ngokunyamezela wonke umqulu endikubeke kuwo.
Ndijonge ukuba nasiphi na isicelo endisikhuphelayo kwiVenkile yeApple, emva koko ayindivumeli ukuba ndiyicime, kodwa sikunye nenkqubo ebhaliweyo ngaphambili, eya kuyicima kwiLaunchpad. Ndifumana ifestile ethi ngokoqobo oku kulandelayo: IFINDER IFUNA UKWENZA UTSHINTSHO. FAKELA IPHASIWEDI YAKHO UKUVUMELA Lo msebenzi. Igama lomsebenzisi ****************** Igama eligqithisiweyo ****************, kwaye emazantsi, Rhoxisa okanye wamkele iifestile. Ngaba umntu unokundixelela ukuba kutheni le nto isenzeka kum? Ndiyabulela kakhulu.
Ndibulisa kubo bonke, yonke into oyibonisayo iluncedo kakhulu, kodwa ndiyakuxelela ukuba sendizakuhambisa i-macbook yam ka-2015 endiyithengisileyo kwaye ndifuna into eyahlukileyo kule uyibonisayo… Ndidinga ukucima iifoto, idatha, njl, ndiyishiye icocekile kodwa ngaphandle kokucima usetyenziso, ndicela uncedo lwakho nceda
Enkosi appzapper undisebenzele.
Khuphela iifonti zasimahla ezili-12 zexesha elinomda kunye neefonti zeCalligraphic